Maqaalka Alexandra Isenegger ee Martech Zone |
Maqaallada by Alexandra Isenegger
Alexandra waa maamulaha guud ee Linkilaw. Bilaabashadu waxay ubaahan yihiin dukumiinti sharciyeed adag oo qareenadu waxay kucaawiyaan qiime waali ah. Linkilaw waxaa ka go'an inay joojiso wax qabad la'aanta, toosinta adeegyada sharciga & caawinta shaqada sharciga inay noqoto mid la heli karo. Iyada oo loo marayo tikniyoolajiyadeena, xalalka guriga iyo suuqa sharciga, waxaan ku siineynaa bilowga taxanaha B taageerada ugu weyn ee sharciga weligeed.
Axad, Abriil 30, 2017 Monday, May 1, 2017 Alexandra Isenegger
Isgaarsiinta iyo macaamil ganacsi marwalba way iswada qabsadeen. Tani waa run in kabadan sidii hore, iyada oo helitaankeena sii kordhaya uu sii kordhayo aaladaha internetka, ha ahaato kumbuyuutarradeena, kiniiniyada ama taleefannada gacanta. Sababtoo ah helitaanka deg degga ah ee macluumaadka cusub, websaydhka shirkadda wuxuu u noqday aalad muhiim u ah ganacsiyada inay ku gaarsiiyaan wax soo saarkooda, adeegyadooda, iyo dhaqankooda suuq ballaaran. Websaydhadu waxay awood siinayaan ganacsiyada iyaga oo u oggolaanaya inay gaaraan oo ay gaaraan